Uummata miliyoonaan daandiirra jiraatu akkanaa utuu qabnuu bilisoomne! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsUummata miliyoonaan daandiirra jiraatu akkanaa utuu qabnuu bilisoomne!
Uummata miliyoonaan daandiirra jiraatu akkanaa utuu qabnuu bilisoomne
!OMN: Oduu Guyyaa Amajji 28, 2019
Taajjaabbiin inbox hedduu argataa jira!
BREAKING NEWS BEEKAN GULUMMAA IRRAA
Naaf hooqi siin hooqaa taate dubbiin.
“Maallaqa miliyoona 72.5 niin WBO kaambii galchuu Juwar waada gale
Dubbiin araaraa ammaa faara hinqabu. Juwar akkuma dheengadda dhaadate araaricha xumuruuf Baqqalaa waliin dheengadda Abiyyi bira galmasaa adeemanii turan. Abiyyiin Jaarsolii biyyaas Juwaariif Baqaalaas namatu balbal dura jiraa utuu hinjedhin bakkee oolche. Galgal gaheemmoo Biraanuu Juulaa juwaar bilbilee rakkifnaan bilbila irraa kaasuu didee “Juwar waan waada nuu galte akka waadaa seentetti xumurii nuu bilbili, kanaan ala ofiikees iddoo geessu hinqabdu waan barbaannu si goona!” Jedhee Biraanuun itti dhaadate. Waadaan Juwar mootummaaf gale WBO kaambii galchuudha, mootummaan ammoo yoo kaambii nuu galchite maallaqa miliyoona 72.5 sii laanna jedhee waadaa galeef. Juwaris waadaa sana erga Biraanuu Juulaa galeefii booda hararge deeme. Akkuma hararge adeemenis WBO irratti dubbii uummata WBO tti kaasu lallabuu jalqabe. Karoorrisaa jalqaba WBO bakka maraaf uummata wal dhabsiisee WBO humna dhorkatee kaambii galchuu kanas akka irratti hinbaramneef siyyaasa fayyadamuuf ture. Utuu achi jiru mootummaan project Jaarsummaa baafate. Jaarsummaa fakkeessee WBO Gujiiti jechuun midiyaatti baasee Eeliyaas Ganbeel dhadessuu jalqabe. Juwar utuu imalarra jiru fb irraa waa’ee Eliyas Gambeellaa argee kallattiin Dajanee Gutamatti bilbilee hojii kana saffisaan hojjedhu jedhee dhimma Eeliyaas irratti holola akka babal’isan adeessa laateef. Gaaffiif deebii Dajaneen taasisu hanga dhiyatutti jedhe akka oduutti qopheessaa jedhee dhimma Eeliyaasa Gambeellaa akka ajajaa Zoonii Kibbaatti gabaasise. Eeliyaas Ajajaa utuu hinta’in OMN’n soba guddaa kana sobee darbe. Dajaneenis dabalee jara OMN irratti affeere.
Dhimma dheengadda masaraa mootummaa deemanii achii ari’amanii Juwar akka bahe hindubbanne, doorsifamuu isaanii akka hindubbanne bilbilanii qaama tikaa mootummaa keessaa doorsisan. Akka jedhanitti “yoo baatee dubbatte, waan waliin hojjechaa turre icciitii sana baafna! Kana malees si ajjeefna!” Jedhanii Juwariitti warri mootummaa dhaadatan. Juwaris zim jette.
Dubbiin araaraa kun iddoo hedduutti lola taate, sababaan maallaqa WBO kaambii galchuuf mootummaa biraa ramadame, hirachuurratti waldhabdeen Baqaaleef Juwaar gidduutti dhalatee ture. Juwariif Abiyyi gidduuttimmoo dhimma Raayyaa ittisa biyyaa irratti wal dhabdeen ta’e. Ammas Juwariif abbootii gadaa gidduus lola jira. Innimmoo Juwar waan hunda waanan jedhutu hojiirra oola jedha. Dabalataan waadaa mootummaaf gale, baatii muraasa gidduutti WBO kaambii galchee ficisiisuuf qabdii maallaqa waan fudhateef waadaa mootummaa guyyaashee waliin guutuuf sardamaa jira. Jaarroliin abbootii gadaa jarjartii isaa kana jibbanii jiru. Lolli kun guddatee amma koree teknikaa nama 72 keessaa 20 kan hincaalle qofatu hojiirra jira. Akka jedhamu taanan gootichi Obbo Hayileen keessaa hafanii jiru. Kun ammoo dhiibbaa Juwaar irraa madde jedhama.
Ibsa midiyaaf laachuuf Juwar kaleessa miidiyaalee waame tika mootummaatu itti dhaadatee hambisiise. Ammas itti dhadataa jiru. Juwar akka waadaa galetti WBO kaambii galchuu hindandeenye. Maallaqa guddaan kan lakkifamuuf gaafa WBO’n kaambii galudha. Kanaaf sardamee akka jiru dubbatama. Mootummaan hudhee qabee jira. Dafii akka jettetti kaambii galchi, hojii biraatti ceena dhimma WBO fixbee jedhaanii jira mootummaan. Innimmoo akka yaade ta’uufii dide.
Bahee mootummaa irratti dubbachuuf walii galtee WBO kaambii galchee rukuchiisuu sanatu icciitiinsaa waan bahuuf yaadda’a. Gama kanaan ammoo muddamee waan jiruuf WBO irratti uummata duulchisee dhiibbaa WBO irratti gochuun uummata jibbisiisuuf ajandaa qabatee akka jiru dubbataa jira. Juwar yeroo dhiyootti bahee WBO fi uummata wal-dhabsiisuuf qophaa’ee jira. WBO irratti shiftaadha jedheen barreessa jedhee hiriyaasaatti himeera. Kunis waliigaltee mootummaa waliin inni godhee jiruuf maallaqa mootummaa waliin walii mallatteessan akka argatu nii godha jedhee yaadeeti. Maallaqichi miliyoona guddaa akka ta’e dhaga’een jira. An warra koree teknikaa 72 keessan jira, ammammoo warra nama 20 keessa jirra. Kaan faca’aniiru. Juwaar waliin waanan ooluuf waan inni godhu hundan suuraa waliin sii erga!”
Garamitti baha laata? WBO kaambii galchee ficcisiisee maallaqa fudhatamoo, nii dhaba laata? Bullee ilaalla
Hacuun akkas jedhe…… Eebba Meelbaa Adaamaatti, wayita Suuraa Dr. Abiy, Lammaa fi Jawaar birrii 145,000 injifatetti!
Naaf hooqi siin hooqaa taate dubbiin. “Maallaqa miliyoona 72.5 niin WBO kaambii galchuu